GlobalNet | Get FREE 60 Days for Google Workspace Business Mail
Get FREE 60 Days for Google Workspace Business Mail
Google Workspace ၏ Business Email (5) Licenses မှ စတင်ဝယ်ယူသည့် Customer များအတွက် ရက်ပေါင်း ( ၆၀) အခမဲ့ အသုံးပြုခွင့်
September လ၏ Special Promotion အဖြစ် Google Workspace ၏ Business Email5Licenses မှ စတင် ဝယ်ယူအသုံးပြုပါက ရက်ပေါင်း ( ၆၀) အခမဲ့ အသုံးပြုခွင့် ပြုမည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်း ပါးအပ်ပါတယ်။
ယနေ့ခေတ် လူသုံးများကြတဲ့ Free Gmail ကို Business Email အနေနဲ့ လွယ်ကူစွာ ပြောင်းလဲ အသုံးပြုဖို့ Google Workspace Business Email များကို Individual Account တစ်ခုမှ စတင်၍ Google Workspace ၏ Myanmar Official Partner ဖြစ်သည့် Global Technology (GlobalNet) တွင် ဝယ်ယူရရှိ နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
Google Workspace Email ဆိုတာ Google က တရားဝင်ရောင်းပြီး ကိုယ်ပိုင် Domain Name ( သို့မဟုတ်) GlobalNet ၏ General Domain များနှင့် အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Business Email ဖြစ်ပါတယ်။ Gmail Free Service များတွင် ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိတဲ့ Account Lock ကျခြင်းများ၊ Storage မလုံလောက်ခြင်း ပြသနာများမှ ကာကွယ်နိုင်ပီး ကိုယ်ပိုင် Domain နှင့် အသုံးပြုထားခြင်းကြောင့် Security ကိုအပြည့်အ၀ ရရှိ စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Google Workspace ရဲ့ All in one Suite တွင်ပါဝင်တဲ့ Applications တွေကတော့
? Google Email
? Google Chat, Docs, Sheet,
? Google Forms နှင့် Google Sites
အစရှိသည့် google services နှင့်ပတ်သက်သည့် အသုံးဝင်သော Service ပေါင်းများစွာကိုလည်း Google Cloud Platform ပေါ်တွင် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Google workspace email ကို Google ၏ Myanmar Official Partner ဖြစ်သော Global Technology တွင် Individual License Account တစ်ခုမှ စ၍ မိမိအသုံးပြုလိုသော နာမည်နဲ့ Business Email Account များကို Official License များဖြင့် One-Stop Service ရရှိအောင် ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးလျက်ရှိပါသည်။
GlobalNet မှ Partner Supporting အနေနဲ့ Free Consultation & Free Setup, Training from Google Workspace Certified Professional, Billing can pay with Local Currency, Local team support with Professional Certified Engineers တို့ကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
GlobalNet’s Campus Security Solution ...